Masuuliyiinta sarsare ee xusbiga kulmiye oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha dhex iyo afhayeenka xusbiga oo xubno kale oo hogaanka xisbiga ka mida ayaa qado sharafeed ku macsuumay gudoomiyaha kulmiye ee dalka ustralia Md, Xasan axmed maxamed halac oo ku sugan magaalada hargaysa. | Maalmahanews
Masuuliyiinta sarsare ee xusbiga kulmiye oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha dhex iyo afhayeenka xusbiga oo xubno kale oo hogaanka xisbiga ka mida ayaa qado sharafeed ku macsuumay gudoomiyaha kulmiye ee dalka ustralia Md, Xasan axmed maxamed halac oo ku sugan magaalada hargaysa.
Hargaisa:(Maalimahanews) Masuuliyiinta sarsare ee xusbiga kulmiye oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha dhex iyo afhayeenka xusbiga oo xubno kale oo hogaanka xisbiga ka mida ayaa qado sharafeed ku macsuumay gudoomiyaha kulmiye ee dalka ustralia Md, Xasan axmed maxamed halac oo ku sugan magaalada hargaysa.
Casuumadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay looguna talagalay inay madaxda hogaanka xusbiga kulmiye ku soo dhaweeyaan gudoomiye xasan ayaa si aad u qurux badan laysugu waraystay isla markaana maamuuskii iyo milgihii lagu soo dhaweeyay gudoomiye xasan uu si miisan leh uga mahad celiayay.
Xubnahan madaxda xusbiga kulmiye ayaa si fiican ugu bogaadiyay intii ay ku sugnaayeen qado sharafeedka gudoomiye xasan hawlaha shaqo ee uu dalka uu joogo iga hayo xusbiga kulmiye iyo waliba sida xilkasnimada aqoonta iyo mudakarnimada leh ee uu u guto waajibaadkiisa shaqo isagoo ah xubin fifircoon oo ka soo baxay shaqadii loo igmaday uguna boaadiyeen shaqo wanaagiisa iyo xilkaska uu yahay ba taasina ay noqotay mid sii dhiiri galinaysa inuu waajibaadkiisa shaqo sii dardar galiyo.
wakhtigan lagu jiro oo ay mudo kooban ka hadsan tahay xiligii doorashada madaxtooyadu ku astaysnayd ayaa si aad u saraysa ay isaga waraysteen isla markaana kulano danbe iyo munaasibado kale oo ilaa heer halka u saraysa ee xusbiga kulmiye hogaamintiisa ay kulano noocan oo kale ah u balameen.